Wararka - “Tijaabada degdegga ah ee COVID -19 (Dahabka Colloidal)” ee JBT ka hesho xaqiijinta PEI Jarmalka iyo u -qalmitaanka dhoofinta caddeynta si guul leh
“Tijaabada degdega ah ee COVID-19 antigen (Colloidal Gold)” ee JBT ka hesho xaqiijinta PEI Germany iyo u-qalmitaanka dhoofinta caddeynta si guul leh
01. COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) oo ay soo saartay Teknolojiyada Biomedical Joinstar ayaa ka helay xaqiijinta waxqabadka machadka Paul Ehrlich. Iyada oo ay weheliyaan Abbott, Roche, SD, BD, Siemens LumiraDX, iyo shirkado kale oo caalami ah oo caan ah, Joinstar Biomedical Technology waxay noqotay mid ka mid ah soosaarayaasha antigen -ka ee oggolaaday PEI dufcaddii ugu horreysay adduunka.
“Paul-ehrlich-institut” (PEI) waxay matalaysaa machadka dawladda dhexe ee Jarmalka ee tallaallada iyo Biomedicine, oo mas'uul ka ah hay'adda cilmi-baarista dawada iyo wakaaladda sharciyeynta. PEI sidoo kale waa hay'ad sare oo federaal ah oo u wargalinaysa Wasaaradda Caafimaadka ee Federaalka, xarun iskaashi oo loogu talagalay hubinta tayada alaabada dhiigga ee WHO iyo qalabka ogaanshaha faytarka. Waxaa loogu magac daray agaasimihii aasaasay, ku takhasusay difaaca jirka iyo abaalmarinta Nobel, Paul Ehrlich.
02. Ku saabsan baaritaanka antigen degdeg ah
Maxaan ugu baahanahay baaritaan degdeg ah oo antigen ah?
Antigen waxaa loola jeedaa walax soo saari karta unugyada difaaca jirka, waa walax kasta oo kicin kara jawaab -celinta difaaca jirka. Baaritaanka Antigen-ka waxaa loo isticmaali karaa marxaladda hore ee cudurka (ka dib marka ay calaamaduhu bilaabmaan 1-5 maalmood gudahood ama xitaa inta lagu jiro xilliga ka-hortagga) si loo helo natiijooyin wanaagsan. Habka ogaanshaha antigen-ku wuxuu aad ugu habboon yahay baaritaanka waqtiga-xasaasiga ah ee kiisaska la tuhunsan yahay ee cudurka coronavirus-ka weyn wuxuuna aad waxtar ugu leeyahay aagagga uu cudurku ka dillaacay. Marka loo eego xaaladda ba'an ee adag, WHO, FIND iyo ururo kale oo badan oo caalami ah ayaa kor u qaadaya ogaanshaha Antigen -ka sidii habab wax ku ool ah.
Oo ay ku jiraan UK, France, Slovakia, Slovenia, Georgia, iyo dalal kale oo badan ayaa durba bilaabay inay iibsadaan kuna dhaqmaan Imtixaanka Degdegga ah ee Antigen meelaha dadku ku badan yahay.
COVID-19 Baaritaanka Degdegga ah ee Antigen (Dahab Colloidal)
dheecaan nasopharyngeal sida muunad
Dareenka sare & gaar ahaaneed
Xilliga daaqadda gaaban, ogaada cudurrada marxaladda hore iyo xilliga soo -kabashada, oo waxtar u leh baaritaanka hore. Ogaanshaha hore wuxuu keenaa daaweyn ka fiican.
Ku habboon xaaladaha kala duwan: hay'ado cayiman (sida isbitaallada); dib -u -bilaabidda shaqada iyo dugsiga, kormeer joogto ah oo ku saabsan xaaladaha wadnaha ee cusub, iwm.
Habka hal-talaabo ah, oo ay fududahay in la shaqeeyo, yaraynta ogaanshaha la seegay iyo ogaanshaha qaladka ee ay keeneen khaladaadka hawlgalka;
Bixiyaan reagents iyo alaab -qeybiyeyaal u baahan baaritaanka; qalab looma baahna;
Hawlgal degdeg ah, waxay keentaa 10-15 daqiiqo;
Heerkulka kaydinta: 2 ~ 30 ℃, looma baahna gaadiid silsilad qabow ah;
Tilmaamaha Ikhtiyaariga ah: 25 adeeg/sanduuq, 1 adeeg/sanduuq;
Hababka iskaashiga badan, aqbalida OEM/ODM
04. Shahaadada la qaatay:
Shahaadada CE, liistada dhoofinta ee Wasaaradda Ganacsiga
Waxaa lagu taxay keydka xalka tijaabada xalka coronavirus ee EU, oo ay liis garaysay WHO-FIND Innovation Foundation, waxayna dhaaftay kormeerkii PEI ee Jarmalka,
Shahaadada diiwaangelinta ee Jarmalka iyo Talyaaniga